Author: Kazrar Gom
Ma jiro wax bixin ama tilaabo la qaadayo hadii wax u dhacaan sida sidaan caksiga ku ah ma jiraan wax tilaabo ah oo dowlad goboleedku qaadi karto markii dowlada federaalka ahi dabacsan tahay ama u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka.
Siyaasadda iyo Xukunka Soomaaliya. Arrintaas ayaa hadda si rami ah u dhacday kadib markii xildhibaano ay mooshin ka gudbiyeen Safiirka imaaraatka dasyuurka ee Soomaaliya u jooga, oo ay ku eedeeyeen in uu farogalinayo arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Mid ka mid ah waa Somaliland oo gooni isu taagtay sheegatayna in ay tahay jamhuuriyad madax bannaan. Dawladda Osomaaliya mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan waloow uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta. Qoraalka mooshinka ayaa lagu soo gabogabeeyay jumladdan “Mudane Guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, wax badan ayaan u dulqaadanay meel-ka dhacyada iyo gabood-falada dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ay ku hayaan dawladaha shisheeyuhu, ayadoo maantay ay na hortaallo dasyuurka aan wax uga qaban karno, waajibaadkeena qaran aan ku gudan karno, Alle iyo umadda hortooda”.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga. Bishii June maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa sidoo kale kasoo horjeedstay xeerka isgaarsiinta qaranka oo golaha wasiirada meelmariyeen, waxayna maamulada sheegeen in dowladda federaalka ay hareermartay waxyaabihii horey looga heshiiyay ee xeerkan ku saabsanaa oo dhan.
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood. Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Afhayeen, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya.
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda dhexe, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen. Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya.
Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada.
Dalalka kale Adlas Siyaasadda portal. Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Waxaa laga keenay ” https: Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka. Qodob kale oo Aqoon Guud ah.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray. Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda. In other projects Wikimedia Commons. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Xildhibaanada mooshinka gudbiyay waxay safiirka UAE ku eedeeyeen inuu dawladda u gacan dhaafayo arrimaha maamul goboleedyada.
Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga.
Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Xaaf soomaaliiya dowladda federaalka ku eedeeyay in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay federaaoka dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Governo federale della Somalia ; Af-Ingiriis: Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Qoraalka gudaha oo kooban. Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer. Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka 1 Madaxweynaha iyo soomsaliya ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Waxa uu ku baaqay in uu Kismaayo ku fidinayo gogol la’isugu keenayo madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada si loo turxaan bixiyo madmadoowga soo baxay.
Federal Government of Somalia waa dawlad dastuurk caalamku aqoonsanyihiin Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.